Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manohana serivisy an'habakabaka St. Thomas ny FAA
Anio maraina, nifehy ny fivoahan'ny sidina fiaramanidina voalohany ny sidina fitaterana an'habakabaka (FAA) tamin'ny herinandro lasa tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Cyril E. King any St. Thomas, Nosy Virgin US (TIST). Miasa avy amin'ny tilikambo fifamoivoizana an-tsambo finday ny FAA nifindra tany amin'ny nosy ny faran'ny herinandro lasa teo, ny mpitantana dia mitantana fifangaroana sidina ara-barotra, miaramila, fanampiana ary fanarenana mankany sy avy amin'ilay nosy norofain'ny tafio-drivotra.
Ny FAA dia manohy manohana hetsika mitovy amin'izany any San Juan, Puerto Rico izay nanombohan'ny serivisy fitaterana seranam-piaramanidina voalohany herinandro lasa izay. Ny isan'ny sidina miditra sy mivoaka ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Luis Munoz Marin any San Juan (SJU) dia nitombo be tao anatin'ny herinandro lasa izay, 400 mahery ny tonga sy ny fiaingany omaly.
Mpitondra fiaramanidina mpandeha an'habakabaka amerikana no nanidina sidina 18 hiditra sy hivoahana an'i San Juan omaly, ka ao anatin'izany ny fifangaroan'ny serivisy ho an'ny mpandeha sy ny fidiram-bola. Sidina telo hafa amerikana koa no nanidina nankany amin'ny nosy. Ny The Airline Guide, izay mamoaka ny fandaharam-potoana fiaramanidina kasaina amam-bolana mialoha, dia mampiseho fa 28 ny mpitatitra fiaramanidina amerikana nokasaina hidina ao San Juan amin'ny 28 septambra, alohan'ny hahatongavan'ny rivodoza amin'ny nosy.
Ny masoivohon'ny fitantanana vonjy taitra federaly (FEMA) dia nametraka laharam-pahamehana ho an'ny hetsika sidina hiditra sy hivoahana an'i San Juan, mifototra amin'ny filan'izy ireo.
Ho fanampin'ny seranam-piaramanidina Luis Munoz Marin any Puerto Rico, seranam-piaramanidina efatra hafa eto amin'ny nosy no misokatra tsy misy ferana:
Seranam-piaramanidina Rafael Hernandez any Aguadilla (BQN)
Seranam-piaramanidina Mercedita any Ponce (PSE)
Seranam-piaramanidina Jose Aponte de la Torre any Ceiba (RVR)
Seranam-piaramanidina Fernando Luis Ribas Dominicci (fantatra ihany koa amin'ny hoe Isla Grande), any San Juan (SIG)
Nikatona ny seranam-piaramanidina Eugenio Maria de Hostos any Mayaguez (MAZ).
Ny seranam-piaramanidina Henry E. Rohlsen ao St. Croix dia nanantena fa hisokatra amin'ny serivisy ara-barotra tsy ho ela.
Ny seranam-piaramanidina hafa rehetra any Puerto Rico sy ny Nosy Virgin US dia misokatra miaraka amin'ny fameperana ary, farafaharatsiny, manaiky fiaramanidina, vonjy taitra ary sidina fanampiana.
Azafady mba zahao miaraka amin'ny zotram-piaramanidinao raha manidina amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny faritra voakasik'izany ianao.